Ngwọta Jerry Varghese International na-ahụ maka ndị na-achọ ọrụ zuru ụwa ọnụ. Expats si India inyere ndi mmadu aka inweta oru.
Ọrụ na Dubai na Jerry Varghese International Careers. Ụlọ ọrụ ahụ bụ otu n'ime ndị kasị mma n'etiti ndị nchịkọta. Iji kwu eziokwu, Jerry Varghese bụ ndị otu ndị na - ewe ihe n'ọrụ azịza mbanye ọkachamara maka expats. Ejiri ọkwá ndị dị elu hiwere isi. Jerry Varghese bụ ndị ndụmọdụ kachasị mma na ọkachasị. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ ahụ na-enye usoro ntinye na nke zuru oke ndị na-ewe ndị ọrụ ọrụ na Gulf.
N'otu oge ị na-eji Jerry Varghese International Careers. N’ezie, ha weta ebe a na-akwụ ọnụ ahịa n’ahịa Dubai. Isi ihe ọzọ ị ga - arụ ọrụ bụ ụlọ ọrụ na ọrụ gọọmentị. Ihe mbụ ị ga-echeta ụlọ ọrụ ahụ inwe oke ọnụnọ na Middle East ha wee rụọ ọrụ ihe karịrị 30 afọ. N'elu akụkụ dị mma mgbe ị na-achọ ọrụ na ụlọ ọrụ mbanye. You nwere ike ịtụ anya ọrụ mba ụwa na ọrụ ndị ọrụ. Ọ bụghị naanị na ụlọ ọrụ dị na Gulf kamakwa n'usoro zuru ụwa ọnụ.
Maka afọ 25 ikpeazụ, Jerry Varghese enyere ndị na-achọ ọrụ. Na-ekwu okwu n'ozuzu ụwa na nke gụnyere India na Pakistan. Ọtụtụ ihe akaebe na-egosi na ụlọ ọrụ bụ otu n'ime ihe kachasị mma. Ha bụ n'ọrụ ọnụnọ ha na nchịkọta ụwa ahịa mara na Middle East.
Maka nke a, anyị na-anwa ịme ka ụlọ ọrụ mata gị. Dịka egosiri n’elu ụlọ ọrụ nghọta nke ahịa mbanye. N'ọnọdụ ọ bụla, ịchọ ọrụ maka ha bụ ezigbo nhọrọ. Ọhụrụ ọ bụla onye na-achọ ọrụ na-eche nsogbu dị iche iche ihu site n'ịchọ ọrụ na GCC.
Ọrụ Jerry Varghese Dubai
Mana oge oge ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ nke ọma. Mụ na ndị were gị n’ọrụ na ndị na-ewe ihe n’ọrụ iji nye gị ihe kacha mma iwe ego maka ahia mba uwa. Nke a na-eji akwa akwa inweta ihe ngwọta maka onye ọ bụla eme ka ụlọ ọrụ a buru ibu na Facebook na Linkedin. Ntughari na Dubai, United Arab Emirates na-enyere umuntakiri aka ha aka ichikota mkpa ha.
Jerry Varghese na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ 11. Site n'oge ruo n'oge ụlọ ọrụ a na Ndị ọrụ Dubai, ikike onye oru ha nwere ikike di iche-iche. Ọhụrụ site na ọrụ achọrọ n'ọrụ mba ụwa, n'ezie, dabere na ahụmịhe onye chọrọ. N'ihi na ọtụtụ akụkụ ịma aka na ịchọta ọrụ na Dubai. Ime ụlọ ọrụ a ihe kasị mma iji mee maka oge ndị a.
Jerry Varghese na-arụ ọrụ ọfịs ọrụ zuru oke ma ị nwere ike iji ya n'oge ọ bụla ịchọrọ. Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ mgbagwoju anya ọrụ a dabere na mba GCC. Ma ị nwere ike ịchọta ohere ndị nwere mmasị na ha ka ọ dịrị ha mfe na weebụsaịtị ha. Mee elu mee ala, ndi oru nlere anya amara nyere ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ aka na Dubai aka. Companylọ ọrụ na-arụ ọrụ na ọtụtụ ndị ahịa yana n'ezie ọtụtụ ndị mmeri.
Na-arụ ọrụ obodo ọrụ dị ka tagzi na Dubai bụ ebumnuche maka ndị na-achọ ọrụ. Ya mere dabere na ụlọ ọrụ ahụ na-ejikwa ezigbo ụkpụrụ. Maka ịrị elu na-arịwanye elu, yana ọkachamara na ịzụta ahịa na-eme ka nzukọ a bụrụ n'ezie kacha mma maka akụ na ụba mmadụ na Dubai City.
Jerry Varghese kwesịrị ịbụ onye ibe
Ruo ugbu a, Jerry Varghese na-arụ ọrụ n'ahịa ahịa ụwa. Na nke ọma inye ọrụ nbanye maka ihe karịrị 30 afọ. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ a nwere ụlọ ọrụ na India.
N'akuku ụlọ ọrụ na-enye ọkachamara & ọrụ nchịkọta ọrụ nyocha. Ekwu okwu maka Ndị India chọrọ ịmalite ọrụ na Dubai. Site n'oge ruo n'oge karịrị ndị ahịa mba ụwa nke 500 na-achọ imeju mkpa ọrụ mmadụ. Ozugbo ịchọrọ itinye okwu banyere ohere ndị mba ụwa na nweta ọrụ ngwa ngwa.
Companieslọ ọrụ ndị dị na Gulf na-agafe karịa atụmanya nke ndị ọrụ. Yabụ mkpa ịchọta ọrụ kwesịrị ekwesị na ndị na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ọrụ ihu ụwa gị. Yabụ na mgbe ịchọrọ itinye aka na Jerry, a ga-enye gị CV maka ihe zuru oke ọrụ na Dubai 2018.
Nyocha Jerry Varghese
Thislọ ọrụ a na - ewe ndị ọrụ akpọrọ Jerry Varghese. N'ikwu okwu n'ozuzu na-eme ememe karịa 30 gbakwunyere afọ nke nke oma n’oru igba ndi n’agha. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ na-enye ndị ọkachamara ọrụ na-achọ Saudi Arabia & ọrụ nchịkọta ọrụ ngwọta. Ha na-enyere ndị mmadụ aka site na India esi enweta visa.
Site na ụlọ ọrụ a, ị nwere ike ịrụ ọrụ kwa ọnwa na ihe karịrị 400 gbakwunyere òtù ndị ahịa. Ụlọ ọrụ a gbasaa site na 11 ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ Gulf ebe ị nwere ike ịzụ onwe gị.
Ọrụ na Dubai City na-agafe weghachite profaịlụ, ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ nke ndị na-ahụ maka ọrụ na United Arab job market. Companylọ ọrụ a na - enye ndị ọrụ ọzụzụ zuru oke & ọnụ ahịa ọrụ maka ndị isi azụmaahịa dị na ahịa ọrụ Gulf.
Ụlọ ọrụ ọhụrụ na gọọmentị. Ndị otu ọkachamara anyị na-agbasi mbọ ike na-enye anyị ihe ngwọta ndị ọrụ iji jiri nghọta anyị usoro nchịkọta usoro, akụrụngwa & teknụzụ iji nweta ebumnuche azụmaahịa ahịa anyị.
Dịka ụlọ ọrụ, Jerry Varghese International Careers kwenyere na ndị ike. Karịsịa maka ndị ọgbọ na Middle East. Companylọ ọrụ nchịkwa a na-eche na ndị ọrụ bụ uru kachasị baa uru nke azụmahịa ọ bụla. Rụ ọrụ na Middle East bụ nrọ kachasị maka ọtụtụ ndị mba ofesi n’obodo niile.
Companieslọ ọrụ ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ na-achọ mkpa nke ndị si mba ọzọ. Companylọ ọrụ anyị na-anwale mgbe niile ka ahọpụta nd i oz o inyere ha aka. Ọ bụ ya mere anyị ji ede edemede banyere ụlọ ọrụ a. Njikwa ahụ nọgidere na-arụ na jigide azụmahịa zuru ụwa ọnụ na GCC. Jerry Varghese ji ọrụ kachasị mma maka nzukọ ọ bụla.
Ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ha na-eji ihe karịrị iri afọ n'ime ụlọ ọrụ ahụ Ndị ọkachamara n'ọfịs. Ijiri ụlọ ọrụ a were ihe karịrị 31 afọ azụ. N'ihe dị iche iche nke India na Gulf Countries, ụlọ ọrụ a guzobere nzukọ nke ụwa. Na-ekwu okwu na-akwado ụlọ ọrụ ọkachamara. Na ịhọrọ ihe kachasị mkpa maka nchịkọta ego ahịa na GCC. Jerry Varghese International Careers bụ ụlọ ọrụ dị mma maka ndị India.
Ọrụ na mba Gulf
Tupu ọbụna ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ. Mmalite ahụ chọrọ ezigbo akụrụngwa na India. Ụlọ ọrụ ahụ bidoro site na ọkachamara siri ike n'etiti azụmaahịa na Dubai. Ha amalitela na usoro nlekota oru nke juputara nke ọma na klas nke uwa na India.
Ị nwere ike ịgwa ha okwu na mobile iji soro ndị ụlọ ọrụ na ndị na-aga ime. Ọ bụ ụzọ kachasị mma iji nye ndị ọrụ ego ọrụ ego. Karịsịa kwupụta itinye ego na itinye n'ọrụ ego na India. Mgbe ahụ, ibugara ndị si mba ọzọ kwabata na mba ndị dị na Gulf. Ihe akaebe kasịnụ na-egosi nke ahụ ị kwesịrị ịmalite ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ a bụ ndị ọrụ ha bụ ọkachamara. N'ihi na ha niile raara onwe ha nye maka itinye akwụkwọ n'ọtụtụ mba. Iji maa atụ, inwere ike ịchọta ọrụ na Saudi Arabia niile arụ ọrụ ego.
Jerry Varghese International Careers bara uru Ndị India na ndị na-aga ime obodo. Companylọ ọrụ ndị na-ewe ndị ọrụ na-enyere ha aka imezu ego ọ bụla Ụlọ ọrụ Gulf. Karịsịa site na United Arab Emirates na Qatar. Ma n'aka nke ọzọ, ịkwesịrị iti ụfọdụ ihe mgbaru ọsọ. N'akụkụ dị mma, ịnwere ike ịnweta obere oge na ogologo oge ohere ọrụ na Ọwara.
Ọrụ ndekọ nke Jerry Varghese
Jerry Varghese arụ ọrụ maka MBA studentsmụ akwụkwọ na-agbasa ebe niile gafee iche iche ọrụ ahịa. Ọnụnọ nke ahịa ịzụ ahịa India. N’ikwu okwu, ịrị elu na mba ndị ọzọ niile dịka Kuwait na Oman. Jerry Varghese mbanye dị ka a onye obula n’enye ndi mmadu n’agha n’obodo Gulf. Nlekọta nke ụlọ ọrụ a na-eme ka a mata banyere mgbalị ahụ. Karịsịa maka mmekorita ya na ndị ndụmọdụ ndị ọzọ nke mba ụwa. Njikwa a nwere tinye ego siri ike iji wulite mmekọrịta siri ike ya na ndi ozo ma wue akụrụngwa siri ike na India.
The ihe ahia ahia bụ ntọala nke azụmaahịa ọ bụla. Mana ụlọ ọrụ a hiwere isi na nyocha dị elu. Ọzọkwa, ha na-enwe ike ịkwado ndị mmeri ọhụrụ. Site na ahịa mkpọtụ na India. N'ihi na ha na-agba mbọ iru ọkwa dị elu nke mbanye njikwa arụmọrụ siri ike.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị ọrụ si South Africa enwere ike idowe gị. N'ihi na ụlọ ọrụ anyị na-enyere aka n'akụkụ ụwa nile. Ọmụmaatụ, Ozi si Filipin na-etinye na UAE. -Lọ ọrụ na-arụ ọrụ kachasị na India. N'ikwu okwu n'ozuzu, ha nwere ọnọdụ dị mma. Dịka ọmụmaatụ, alaka ụlọ ọrụ na-ekpuchi akụkụ bụ isi nke India sitere na Delhi gaa Trivandrum.
Ụlọ ọrụ kachasị mma iji chọta ọrụ
Mana ị nwere ike itinye ya na otu n'ime ebe kachasị mma maka ndị ọrụ Dubai. Ụlọ ọrụ ahụ enyere ndị nkụzi aka inweta ọrụ na ndi oru iji choputa oru ugwo.
Ụlọ ọrụ anyị na ụlọ ọrụ ọrụ ọrụ anyị dị na ego ego nke mba ahụ, Mumbai. Ọnụnọ Pan-India na-enye ohere ka anyị jikọọ na nnukwu ọdọ mmiri nke talent ma nweta nchịkọta kachasị mma nke ndị mmeri n'ihi na ndị ahịa anyị na-azụ ahịa ahịa ụgbọala. N'okwu dị mma, Jerry Varghese bụ onye mmekọ na ọtụtụ ọfịs na ha nọ na ya mba dị iche iche dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Ụwa maka ọrụ.
Ị nwere ike chọta ọrụ n'ụlọ ọrụ gọọmentị na UAE & Kuwait nwekwara na Qatar. N'ihi na Jerry Varghese International Career solution. N'ezie, inyere ndị ọzọ aka izute nbudata choro India na United Arab Emirates. Na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ mgbe niile iji nye ndị ahịa ezigbo ọrụ. Na-ekwukarị, na-enyere ndị ahịa aka ọhụụ ego ewe ego rụọ ọrụ nke ọma.
Ụlọ ọrụ a nwere ike inyere gị aka ịchọta ọrụ ọrụ ụlọ ọrụ ebe obibi. Officeslọ ọrụ ndị ụlọ ọrụ a haziri nke ọma dị n'akụkụ ụwa niile ebe dị mkpa. Mgbe ha bidoro iso ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ. Ọfịs onye ọrụ ibe ya bido ị nọchite mpaghara niile. Otu n'ime ihe atụ bụ UAE na Kuwait n'ihi na ọ bụ gburugburu ebe niile.
Companylọ ọrụ ahụ doro anya na-enyere ndị si mba ọzọ aka n'ịchụso ọrụ dị iche iche. Companylọ ọrụ kwa ụbọchị na-arụ nnukwu ndị ọrụ ntuli aka. Na-anwa iru omuma dabere na ahụmịhe ha. Yịkwa ịkpọga ha mpaghara mpaghara a họọrọ. N'otu oge ahụ na-arụ ọrụ na mba expats nyeere ụlọ ọrụ a aka iwebata ndị a na-aga ime gburugburu ụwa. Ma tinye ha na ọnọdụ GCC anyị. N’aka nke ozo biko gaa na nke anyi Ntuziaka maka expats na mba ndị na-akụ ọrụ dị iche iche.
Ndị India na Pakistani na-achọ ọrụ kwa ụbọchị. N'iburu nke a n'uche, anyị bụ na-enyere ndị na-achọ ọrụ aka na UAE. Enwere ọtụtụ dị iche iche na webụsaịtị anyị ebe ndị ọrụ na-ekenye ndị ọrụ ọrụ mpaghara na-enye. Ndị mmadụ si South Africa na India na-ede akwụkwọ maliteghachi n'olileanya nke ahu gha acho oru. Yabụ na ndị otu anyị na-adụ ndị ọhụrụ na-adụ ọdụ ka ha biputere ozi na otu anyị. Gaa na weebụsaịtị nlekọta ọrụ mba Jerry Varghese.
N'ikwu okwu n'ozuzu, tupu i bi na ebe nrụọrụ weebụ anyị. O doro anya na ị ga-elekwa ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ kachasị elu anyị maka ndị na-akwụ ụgwọ. Nyocha ọhụrụ na-achọ ọrụ nyocha Careerjet na Ebe nrụọrụ weebụ Monster maka expats. Ha bara uru itinye akwụkwọ maka CV gị. Ha nwere ike ịdị oke ọ dị mma maka gị na usoro nke ngwa ngwa.
Ọrụ International na UAE
Ịchọrọ ịchọta a Job na Dubai? ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu na anyị nwere ike inyere gị aka ịmalite ọrụ ọhụrụ na The UAE!
Bulite Na-amalite nke kachasị ọsọ Obodo Na-eto Eto n'Earthwa! - Dubai City